Nhọrọ ndị ọzọ: Ebe kachasị mma iji tulee Software na Mepee Software | Site na Linux
Nhọrọ ndị ọzọ: Ebe kachasị mma iji mara ma tulee Software efu
Mgbe ọ bịara weebụsaịtị ịgụ na ịma na ozi ọma nke ụfọdụ Sọftụwia (Sistemụ arụmọrụ, Ngwa na nyiwe) ọ dịghị ihe dị mma karịa Blọọgụ, na mgbe ọ na-abịa Free Software, Mepee Isi mmalite na GNU / LinuxỌfọn, ọbụna karịa.
Blọọgụ dị ka nke anyị, Ndokwa, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ, dị mma isi mmalite ozi ruo ụbọchị na mpaghara ndị a. Ma, mgbe na mgbakwunye na ịbụ ụbọchị anyị chọrọ inyocha n'otu oge ndị ọzọ dị mma dị na mmemme anyị na-agụ, ebe enwere saịtị ndị na-akwado ọrụ ndị a. Ya mere, taa, anyị ga-enyocha ụfọdụ iji hụ nke kacha mma maka mkpa onye ọ bụla.
Ugbua gara aga, anyị emetụla na nke a mgbe anyị na-ekwu okwu Meghee, ya nke, ọ bụ ezie na ọ bụghị kpọmkwem iji tụnyere Free Software ngwa sino Open Source Projects, na-ejekwa ozi a site na obere ngwa ọrụ arụnyere na ya a na-akpọ: Tụlee Projects.
Okwesiri icheta ma gosiputa ndi nwere mmasi Meghee, nke dị ka nke gị ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị:
"Ma ọ bụOtu ntanetị na ndekọ ọha na eze nke Free na Open Source Software (FOSS), nke na-enye nyocha na ọrụ ọchụchọ iji chọpụta, nyochaa, soro ma tụnyere koodu mmalite na ọrụ. Mgbe ọ dị, ọ na-enyekwa ozi gbasara adịghị ike na ikikere oru ngo".
Maka ozi ọzọ na Meghee, na njedebe nke ọgụgụ a ị nwere ike pịa na-esote anyị gara aga metụtara post:
1 Ebe nrụọrụ weebụ ịchọọ maka ndị ọzọ n'efu na imeghe
1.1 Choo uzo ozo na Spanish
1.1.1 Free CD
1.2 Choo uzo ozo na bekee
Ebe nrụọrụ weebụ ịchọọ maka ndị ọzọ n'efu na imeghe
Choo uzo ozo na Spanish
Agbanyeghị na Spanish, saịtị ole na ole dị n'ụdị a, ihe atọ kacha baa uru na ama ama anyị nwetara bụ:
Ebe nrụọrụ weebụ a ma ama na-egosipụta mmemme n'efu, emeghe, na n'efu. Ọ sitere na Spanish ma kwado ọrụ nke ntụnyere ma ọ bụ chọọ ngwa ọzọ ma ọ bụ nke yiri ya, ọ na-ekewa ha n'ime otu n'ime nnukwu na-eto eto Katalọgụ sọftụwia na-akwụghị ụgwọ.
Mgbe ị na-abanye a Udi, ọmụmaatụ, Ihe eserese wee banye Ndị editọ eserese, na-egosi anyị niile yiri software na anyị nwere ike iji rụọ otu ọrụ ahụ, ma na nke ọ bụla, ọ na-enye anyị njikọ njikọ ozi dị iche iche iji mara ha nke ọma.
(Mepee Isi Mmepe NetworkỌ bụkwa ebe nrụọrụ weebụ nwere ọtụtụ afọ n'ịntanetị nke na-enyekarị ọrụ kachasị maka ndị mmepe nke ngwanrọ mepere emepe. N'ime ọrụ ndị a, anyị nwere ike ikwupụta: Nkwado nke nchekwa dịgasị iche iche na ndepụta nzipu ozi, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ, iji nye njikwa dị mfe na nke zuru oke nke ọrụ ndị edenyere aha.
Ke adianade do, o nwere Maapụ Software nke na-ezute otu nzube na njirimara dị ka Katalọgụ sọftụwia na-akwụghị ụgwọ kọwara na Free CD. Dịka ọmụmaatụ, ị ga-pịa Okwu, Multimedia, Graphics and Editors, iji nweta nsonaazụ yiri nke nke Free CD.
Ọ bụghị ebe nrụọrụ weebụ azụmahịa dị ochie, nke sitere na Spanish, nke na-enye ọrụ kachasị mma, na-elekwasị anya na ịkwado ọchụchọ, nyocha na nhọrọ nke ngwanrọ chọrọ maka ndị nwere mmasị. Maka nke a, o nwekwara Akwụkwọ ndekọ software kere site na edemede nke oma.
Otú ọ dị, n'adịghị Free CD y OSDN, ya smart search engine na-arụ ọrụ na nke ọma. N'ihi ya ọchụchọ na tụnyere enwere ike ime ya ngwa ngwa ma rụọ ọrụ nke ọma. Ihe 2 dị mkpa banyere saịtị a bụ na ha na-enye nyocha ndị ọrụ (echiche) na ụzọ ndị ọzọ Nkeonwe, emechiri emechi na ngwanrọ azụmahịa.
Cheta naNa Spanish, enwere obere weebụsaịtị ọzọ na-enye obere uzo ozo nke na-eji weebụsaịtị ndị a tụnyere, na Spanish na Bekee. Enwere ike ileta ya site na ịpị ihe ndị a njikọ.
Choo uzo ozo na bekee
N'asụsụ Bekee, e nwere ọtụtụ saịtị ndị ọzọ, ụfọdụ ga-amata ma jiri ụfọdụ n'ime ha. Ihe kpatara, anyị ga-ekwuru ha naanị nke nta nke nta, ha ga-amata ma jiri ha mezuo ihe ndị ọzọ kachasị mma nke sọftụwia n'efu, mepere emepe na nke enweghị ikike, nke mechiri emechi na nke azụmahịa. Ndị a bụ:
Alternative Iji Linux Software
Chọta Isi mmalite kacha mma
Chọta Ndị Ọzọ Ngwanrọ Kacha Mma
Akwụkwọ ndekọ aha ngwanrọ na-akwụghị ụgwọ
Ihe Efu efu
Ndepụta Software Na-emeghe Isi
Saashub - Ihe ndi ozo di na Software na Nyocha
Cheta na: Imirikiti ebe nrụọrụ weebụ na Bekee gụnyere nyocha akwụkwọ ntuziaka site na edemede na site na igwe nyocha ọgụgụ isi.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" gbasara ebe nrụọrụ weebụ ndị a na-adọrọ mmasị ma dị irè raara nye maka ịkpọsa sọftụwia dị iche iche, ọkachasị ụdị «libres y abiertos», nke na enyere otutu aka ime ka ichota uzo ozo kwesiri ntukwasi obi nke nwere ikike, mechiri emechi na nke ngwanrọ; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Nhọrọ ndị ọzọ: Ebe kachasị mma iji tulee Software na Open Software
Firefox 82 biara na ndozi maka vidiyo, osooso na ndị ọzọ